Izigidi zabantu emhlabeni jikelele zibuza ukuba ungayi kuhlala yedwa, fumana umntu onokubelana naye kunye nemihlali yakho, udale intsapho kwaye ukhulise abantwana abonwabileyo, uhlale ixesha elide, ixesha elide - luya kuba luhle ubomi bakho - ngokuthanda nangokuvisisana, ngokuqinisekileyo baya kukuxhasa kwaye baqonde into onokuyithandayo noyithandwa ngabo.
Ungayifumana njani iqabane lomphefumlo? Akukho ziphakamiso ezithile, ngoko ke wonke umntu wenza ngendlela eyahlukileyo. Abanye bakhula ndawonye, ​​bafunde, benze abahlobo, baze badibanise kunye nokudala intsapho. Abanye balinde ngoxolo xa behleli ekhaya kwaye musa ukwenza nantoni na. Kanti abanye bafuna iqabane eliyingxenye enkulu okanye encinci yobomi bokuqonda. Ngamanye amaxesha bafumana ngokukhawuleza, ngamanye amaxesha batshintsha amaqabane, njengeiglavu. Uthando luyakwazi "ukufika ngengozi xa ungalindelanga konke" kwaye ugcine ixesha lokuphila ... Okanye awukwazi ukuma ukuvavanywa kwexesha.
Kwaye kunjalo kule nqaku ndiya kuzama ukukuxelela indlela yokufumana ngokukhawuleza umlingane womphefumlo. Kwaye ingcebiso eyona nto ayikuthi "ilinde isimo sezulu elwandle", kodwa ukwenza imizamo, zama ukujwayelana, umdla kunye nokugcina umntu.
Ewe, naphi na. Kwizothutho zikawonkewonke, apho ungabonisana nomhambi ohamba kunye naye; kwintetho okanye emsebenzini, apho uyazi ezininzi malunga noogxa bakho; ekufundiseni, kwimibutho, iintetho, imiboniso enomxholo onomdla kuyo, apho unokuhlangabezana nabantu abanomdla, okanye ubuncinane umntu onentshisekelo efanayo; kwimikhosi yomculo, iikonkethi, ezivame ukutyelelwa ngamantombazana amaninzi kunye nabantu abatsha; kwiholide - ngexesha lohambo, elunxwemeni, i-disco, kwindawo yokutyela, i-sauna. Unokungazi kakuhle kwiipaki, izikwere, kwisiteji okanye kwi-intanethi, kwi-intanethi, kwicandelo lezemidlalo ... Akukho ndawo ekhethekileyo yokuthandana, konke kuxhomekeke kwiimeko, kumntu ngokwakhe. Ngamanye amaxesha ukuthandana kwenzeka ngokukhawuleza: "Ndakhangela emva kokuba ndibuke emva ukuba ndibuke emva." Into ephambili ayikuhlala ekhaya.
Eyona nkoliso kaninzi kwiqhinga, inyathelo liyindoda. Injongo yalo - ukufumana isizathu sokuthandana. Iingcebiso kumadoda.
1. Thatha inyathelo kwaye ungesabi "ukufumanisa." Musa ukugubha uloyiko lokuhlangana nezinye izizathu, kodwa ulwe nalo. Kulo lonke ubomi, funda ukukhupha ukwesaba nokungakhuselekanga kwinto ethile. Kwaye amantombazana aya kukuxabisa.
2. Intombazana nayo ngumntu. Yaye ufuna ukuthetha, kuba ngabahlobo. Ngoko ke, thandana "kumsongane onobungane", thetha, indlela yokuthetha nomfana ongaziqhelanga naye. Hlala uhlonela ubuntu bentombazana. Emva koko uya kukuhlonipha kwaye akuthande, afikelele kuwe.
3. Iigoggles aziyi kubuhlungu. Musa ukuthetha ngawe onke kanye kanye. Ungathuli ngento ethile, uthembisa ukuxelela elinye ixesha. Unokuxelela malunga nohlobo lomsebenzi, iimfuno, isikhundla senkululeko. Ngexesha elifanayo, ziqhayisa ngaphantsi kwaye ungathethi nto into ephambili, ukuba amantombazana ayithandi.
4.Izixhobo ezinjengomqondiso wokuqwalasela. Akunakwenzeka ukuba nayiphi na yabasetyhini abayi kunqaba ukuwamkela. Yaye ukuba intombazana yamkele isipho, kuya kuba nzima kuye ukuba ungaphenduli umnqweno wakho wokuziqhelanisa.
5. "Abafazi bathanda ngeendlebe." Ngako oko, ngokuqhelekileyo kubhekisela kuye ngegama, musa ukuzibonga ngokuncoma, uhlazo, ukuba lufanelekile. Konke oku kubangela ukuba uzwelana kunye nokulahla.
6. Intombazana inokucaphukisa okanye ixhala. Ngako oko, akulula ukuyeka ukuzama ukuziqhelanisa, kodwa nokuba nobuqhetseba. Musa ukuphendula ukunyaniseka ukunyaniseka - weqa phambili ezindlebeni. Ngaloo ndlela, awuyi kuba nendawo yokuthandana "fumana ulwalamano", kwaye loo ntombazana ayibuyisanga ukuba ubuyinto yokuqala. Phatha oku ngokuhlekisa. Kungcono ukumamatheka ngokuphendula, uxolo, unokugculela, okanye usho into efana nale: "ungubani, yintoni", "yebo-ah-ah" ... Oku kusebenza ngakumbi.
7. Musa ukuxoka intombazana. Mhlawumbi akayi kunika engqondweni, kodwa uya kuqonda yonke into, ayithathele yona, ayeke ukuthembela, kwaye kuya kuba nzima ukuba uqale ulwalamano olunzulu.
8. Hamba indlela kwaye uqhubeke. Amantombazana ayawaxabisa. Kodwa musa ukunyamezela, ukukhathaza nokucaphukisa. Amantombazana akakwazi ukuma.
Kodwa udibene kunye wamema intombazana ngomhla okanye wedwa kunye naye ufuna ukuqala incoko. Yintoni endiyenzayo? Musa ukukhawuleza ngokubuza imibuzo malunga nobomi bakho. Qala ngeendima eziqhelekileyo. Okokuqala, cinga ukuba uyayazi ngale ntombazana, into ayithandayo, into enomlutha ngayo, kwaye umbuze malunga nayo. Unokuxoxa ngezihlobo eziqhelekileyo, ukufunda, umsebenzi. Okanye uye ngaphaya kwezinto ezidumiweyo: umculo, i-cinema, incwadi, imibuzo yefilosofi, iiklabhu, iindawo zokutyela, izinto ezizithandayo nezithandwayo kwisixeko, njl. Into ephambili: musa ukuguqula ingxoxo ibe ngumbuzo. Sitshele into malunga nawe, iimfuno zakho, uze ufumane isimo sengqondo seentombazana ngezinto ezinjalo. Mamela ngokucophelela uze uhlalutye kulokho utshelwe. Gxila kwiimeko kwaye ubonise ingcinga. Ukuba isihloko sencoko siyaphelile - utshintshe ngokuthe ngqo kwenye. Musa ukuxoxa ngemibandela ebaluleke kakhulu kuwe-oku kunokukwenziwa xa uyazi kunye kwaye uya kuqonda kakuhle.
Njengoko ibhinqa linika inyathelo kumntu, umsebenzi phambi kwakhe ukuziqwalasela ngokwakhe.
1. Ngokuqhelekileyo uye kwiindawo apho ungadibana khona nendoda.
2. Zama ukungena ngombono wakhe ngendoda, ukutsala umdla wakhe. Ukwenza oku, ukubheja kwi-coquetry kunye nesibheno sesini. Yenza kucace ukuba uyazi kakuhle, kwaye awuyi kuthumela, kude. Hamba emdlula kuye ukuze ucoce iphunga lakho, ulungise iinwele zakho, ukhangela amehlo akhe, uncumo olufutshane. Bhozenly bend phezu ukhangele ukuba ulahle okuthile.
3. Faka "ummandla wendawo" yendoda, oko kukuthi, ukuya kumgama okhuselekileyo kuye, oqala ukuva udibaniselwano-malunga nesiqingatha semitha. Esandleni sakho, unokufumana into ethile, umzekelo, umagazini, ukuze ube nesihloko kwingxoxo.
4.Ukuba nangemva kokuba engabonakali umsebenzi, thatha inyathelo uze uthethe kuqala. Yitsho into engathathi hlangothi, umzekelo, ukuba ubuso bakhe bubonakala buqhelekile kuwe. Unokubuza iyiphi iyure, fumana indlela yokufumana idilesi, cela icebiso. Into ephambili kukuba uqale incoko. Vumela incoko iholele indoda, kwaye uyayifumana, ngokufanelekileyo uqondisa inkambo yemibuzo ukuze unxibelelwano luphazamiseke. Ngokubanzi, kholosa intuition yakho. Mhlawumbi insizwa ayiyi kudlala ngemithetho yakho, ngoko yibani nesibindi. Ukuba uyaphula ekuqhelaneni, awuyi kulahlekelwa nantoni na.
Unomdla wokufumana ngokukhawuleza ukufumana umlingane womphefumlo ekudaleni ukucinga ukuba "isigxina sesibini" sifanele sifane. Ewe, intombazana ayikwazi ukudibana "nenkosana enhle", kunye nentombazana "inkwenkwezi evela esibhakabhakeni." Kodwa ukuze ugcine umntu okhethiweyo okanye okhethiweyo, kubalulekile ukuba ubone kuwe into efunayo. Ngokwesiko, indoda ibonwa njengomkhuseli kunye nenkxaso ethembekileyo, ibhinqa njengomama olungileyo. Ngenxa yoko, iimpawu ezibalulekileyo zithathwa ukuba zilungele. Ngomntu, oku kukunyamekela, intlonipho, ukunyamekela, ukuzinikela kunye nokuzihlaziya. Kuba umfazi-ubufazi, ukunyaniseka, ukunyaniseka, ukuvuya, ukungaqiniseki, ukunyaniseka, ukunyamezela, ukunyamekela, ukukwazi ukuqonda, ukududuza, ukunyamekela abanye. Zama ukufumana "ulwimi oluqhelekileyo" kunye neqabane lakho, zama ukufumana ukunyaniseka, nangona kunzima kangakanani.
Ekugqibeleni, ndikucebisa ukuba ungayithobeli ubomi bakho bonke ekufumaneni ukhetho olukhethekileyo okanye olukhethiweyo, kodwa nje ukuzithanda, ukutshintsha ngaphandle nangaphakathi. Bhalisela umdaniso, igumbi lokubhukuda, iqela lezempilo kunye neminye imisebenzi yomzimba. Zifumana iimeko ezinomdla. Shintsha umfanekiso okanye isitala kwiingubo. Kwaye ngokubanzi kulungile. Kwaye abantu baya kufikelela kuwe. Unokufumana ngokukhawuleza umntu onomdla kunye nawe, iimpawu zokuziphatha, imbono kwizinto ezithile. Mhlawumbi uya kuthandana, kwaye uya kuba "isiqingatha sesibini." Qaphela! Into ephambili - ukufuna!
Ngaba kukufanelekile ukubuyisela iimvakalelo ngesizathu?
Ukunganeliseki ngokubonakala komlingane
Amapolisa afuna udade kaVictoria Boni
Iimidlalo zemidlalo ngeapulo
Yintoni ukukhulelwa emva kwe-eco
Inkolo, ukuziphatha, ubugcisa njengendlela yokuqonda ifilosofi ngokwenene
Ukudweba iintolo eziphelileyo phambi kwakho